Ihe 3 dị mkpa iji zere ịkwụ ụgwọ ọrụ IT | Ọ BỤ
A na-enwekarị ihe aga-eme nke ọma, na-agụnye ọtụtụ iberibe ma na-eziga ọtụtụ ihe isi ike nye ndị ahụ gụnyere. N'ikpeazụ, ọ bụghị n'ozuzu na-aga n'ụzọ dị anyị mkpa. Anyị na-agbagha mgbe nile ka a rịọ anyị arịrịọ ka anyị rụpụtakwuo ihe na obere na ọsọ ọsọ karịa ka anyị na-agbanye. Ugbu a ugboro ugboro, anyị na-amị mkpụrụ na mgbalị anyị n'agbanyeghị nsogbu ndị a.
Ọtụtụ isi ihe dị iche iche na-agbakwụnye iji nweta ihe ọ bụla, ma ọ bụ atọ n'ime ihe ndị dị mkpa na-apụta ìhè nke onye ọhụụ na-egosipụta ma na nyocha, nkwurịta okwu siri ike, na ịmata ọdịiche dị mkpa, ilekọta ọchịchọ na ọrụ nke onye ọ bụla.
Gbasaa mkpa, ihe ndị na-atụ anya na ndị ọrụ na-arụ ọrụ
Ndị mmekọ nwere ike imetụta ma ọ bụ nwee mmetụta site n'inwe ego ahụ-site na nhọrọ, mmegharị ma ọ bụ pụta-ma ọ bụ na ha nwere ike ịhụ na ha ga-emetụta. Mmetụta ma ọ bụ hụ mmetụta nwere ike ịbụ ma ọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma na agwa.
Ọtụtụ ụlọ ahịa nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmekọ. Ịghọta na ndị mmekọ niile na-ewuli ihe mgbaba nke ịmepụta ihe. I kwesiri idobe ya ma kọwaputa ihe di mkpa banyere ihe gbasara ha, mmekorita onwe ha, mmetuta, ntinye ike, na ogugu enwere ike ighota ihe ozo, mkpocha na ihe ndi ozo. Mgbe ị na-enweta data a, mara ndị mmekọ dị ka ha si ele ha anya. Nke a ga - eme ka ọ bụrụ ihe na - adịghị mkpa ịmepụta usoro iji mesoo onye ọ bụla. Mgbatị gbasiri ike na njikọ ndị dị mkpa bụ ihe bụ isi iji nweta ihe ịga nke ọma.
Olee otú ị ga-esi na-elekọta ọchịchọ? Site na nkwurịta okwu. Ọ dị oké mkpa na e nwere atụmatụ nkwurịta okwu a ma ama nke akọwapụtara nke ọma iji kwado ndị ọrụ na ndị mmekọ.
Otu akụkụ nke nkenke bụ isi bụ ịmụta site n'ịgwa okwu. Ụlọ Ọrụ Project Management (PMI®) na-egosi na pasent 90 nke ọrụ onye nduzi na-arụ ọrụ bụ nkwurịta okwu, ka ọ bụrụ na o nwere ike, a gaghị egbochi ya ikwu okwu n'oge na-adịbeghị anya. Nkwurịta okwu ziri ezi na-agụnye agụnye, ịkọ akụkọ, ịmepụta akụkọ, ịmepụta data malite na otu nchịkọta wee banye na-esote, na na. Iji mee nke a n'ụzọ zuru ezu, ịchọrọ ka ihe niile gbasara njikwa nkwurịta okwu. Emepụta ndokwa ọ bụla dịka nke a nwere ike ịbịanye n'ime ajụjụ isii nke a ga-ajụ jụụ: Ònye, Gịnị, Mgbe, Ebee, Olee otú na Ntak-a?
Ònye ka a ga-enye ya?
Kedu ihe a ga-enye?
Kedu mgbe ọ ga-eme?
Ebee ka ọ ga-eme?
Kedu ka ọ ga - eme?
Gịnị kpatara o ji mee?
Tupu ịmalite ịzụ ahịa gị, jide n'aka na ị bulie ihe mgbaru ọsọ nile, ebe na ihe ndị dị mkpa. Inweta ihe doro anya na ihe achọrọ ma n'ikpeazụ ị na-azụ zụrụ n'aka ndị mmekọ dị mkpa dị mkpa. Ihe ndị a dị mkpa, tinyere ihe mgbaru ọsọ ndị yiri ya, ihe mgbaru ọsọ na ihe mgbapụta, gbanwee ruo n'ókè nke ọrụ a ga-arụcha, a ga-enwetakwa ya n 'ọhụụ nke ndụ gị. Buru na dika o nwere ike, na ohere na ịghara ịmalite iji nghọta siri ike nke ihe ị na-agbalị imezu, ịkwesịrị ịmalite site n'echiche ọ bụla.
Ọ ga - abụ nsogbu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a na - apụghị ichetụ echezọ, iji nwee ọganihu site na onye mmekọ ma ọ bụrụ na enweghi nghọta doro anya banyere ntụgharị uche na ọchịchọ ha. Nke a bụ ihe mere ndị mmekọ ga-eji bụrụ ndị a ma ama na ọchịchọ ha na-agbasa dị ka oge kwesịrị ekwesị n'ime ndụ ndụ nke a na-atụ anya ya n'ọnọdụ ọnọdụ.
Idebe ụzọ atọ dị mkpa - nkwenye na nyocha nke ndị mmekọ na-emekọrịta ihe, ihe e kere eke na iji nyocha nke nkwalite nkwurịta okwu, nkwenye dị iche iche nke ziri ezi na ihe ndị dị mkpa, ọchịchọ nke onye òtù ọlụlụ na nrụgide ziri ezi nke ịrụ ọrụ-na -eme ọbara ọgbụgba na-edozi na igbu egbu na-eme ka ikike nke inwe ọganihu dịkwuo mma.
Ụbọchị Nzuzo data: Ihe mere ị ga-eji na-elekọta na ihe ị ga-eme